Trafikana zava-mahadomelina Nahomby ny haraton’ny polisy tao Fianarantsoa
Vehivavy iray sy lehilahy iray no tra-tehaka tamin’ny rongony 4 gony. Ny an-dravehivavy no betsaka.
Ny alin’ny talata teo, nahatratra rongony nentina fiara mpitatitra miisa roa ny polisy tany Angodoana teo amin’ilay toerana nahazoana mpitandro filaminana nitondra sokatra ihany. Teo am-pidirana ny tananan’i Fianarantsoa. Rongony miisa 4 gony no tra-tehaka tamin’ny fametrahana sakana. Voalaza fa fiara avy any Toliara ireto nitondra rongony ireto hoentina hiakatra aty an-drenivohitra. Vehivavy no nahatrarana ireo gony misa 3 ary lehilahy iray kosa no nahitana ilay gony iray. Nampanantena ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria foibe Fianarantsoa fa hiezaka hatrany amin’ny famongorana ny asa ratsy amin’iny lalan’ny RN7 iny. Nahazo vahana ny fitondrana an-tsokosoko zava-mahadomelina tato ho ato. Saika avy any atsimo sy avaratry ny Nosy no hamatsiana ny renivohitra.